मलाई मेरो श्रीमान संग सम्पर्क गरे पछि एकदम पोल्छ, र अरुबेला पनि मेरो योनि चिलैरा हुन्छा. दुइचोति मलाई फुन्गल इन्फेर्च्शन भएर औसदी पनि खाए. तर ठिक भएन. मैले ग्यनेचोलोगिस्ट माली देखाएको थिए. उहले हामी दुबैजना लै औसदी दिनु भएको थियो. हामीले खायेउ तर फेरी बल्जीको छ . मेरो श्रीमान लाइ Balanoposthitis भन्ने diagnosis गर्नु भएको थियो सकिन doctor ले, उहाले औसदी लागैरनु भएको छ तर खै ठिक नै भाको छैन, क भएर एस्तो भाको हो अनि क हुन्छा एसको उपचार ? | Hamro Doctor
मलाई मेरो श्रीमान संग सम्पर्क गरे पछि एकदम पोल्छ, र अरुबेला पनि मेरो योनि चिलैरा हुन्छा. दुइचोति मलाई फुन्गल इन्फेर्च्शन भएर औसदी पनि खाए. तर ठिक भएन. मैले ग्यनेचोलोगिस्ट माली देखाएको थिए. उहले हामी दुबैजना लै औसदी दिनु भएको थियो. हामीले खायेउ तर फेरी बल्जीको छ . मेरो श्रीमान लाइ Balanoposthitis भन्ने diagnosis गर्नु भएको थियो सकिन doctor ले, उहाले औसदी लागैरनु भएको छ तर खै ठिक नै भाको छैन, क भएर एस्तो भाको हो अनि क हुन्छा एसको उपचार ?
on Tue, Jun 18 2019 05:20 PM
on Thu, Jun 20 2019 10:26 PM
प्रश्नको लागि धन्यवाद । यस्तो समस्या यौनी ओरपरको संक्रमणमा बढी देखिने गर्छ । कृपया सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला अनि दुबैजनाले औषधि सेवन गर्नुहोला। औसधिको पुर्ण मात्रा डोज मिलाएर खानुहोला। हाम्रोडक्टरबाट अनलाइन परामर्श गर्नको लागि यो लिन्कमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/service/dermatology
on Thu, Jun 20 2019 01:08 PM
swollen testes on Thu, May 28 2020 05:30 PM
29 female I haveamalasma with lots of open pores and it’s been 2... on Thu, May 28 2020 10:46 AM